China chena hasha Sanding Disc-B322 vagadziri uye vanotengesa | Xieyanshi
Item: Sanding bepa disc zita reBrand: XYS
Muenzaniso Nha .: B322 Grit renji: P60-p1000
Type: Round disc kana Roll Saizi: 5 "6" (dhayamita)
Kutsigira: haka uye chiuno / PSA Makomba: 0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
Usage: makorari simbi uye huni ruvara: chena
Rimwe zita: Materical: Aluminium oxide hs kodhi: 6805200000
Kushanda: YeMota Marine Aerospace Wood Simbi
Chinhu Sanding bepa disc
Zita reBrand XYS
Muenzaniso Nha. B322
Grit renji P60-p1000
Type Round disc kana Roll
Saizi 5 ”6” (dhayamita)
Kutsigira chirauro uye chiuno / PSA
Makomba 0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
Kushandisa makorari simbi uye huni
Materical Aluminium oxide
Hs kodhi 6805200000
Kushanda Zvemotokari Marine Aerospace Wood Simbi
Simbi senge aruminiyamu, kabhoni simbi; huni senge softwood kana hardwood ... B322 discing sanding inogona kushanda nesander kune rimwe basa rekupedzisa, senge prep / kugadzirisa, orbital sanding, prepping simbi isati yapenda.
B322 inoshandura mhando yepamusoro yealuminium oxide mineral, iyo inogara yakasimba, pamwe nekuona kukurumidza kukurumidza.
Kupfeka kuvhurika kwejasi kuvakwa, sezvo paine nzvimbo pakati pehasha dzezviyo, kudzivirira guruva kutadzisa, izvo zvinogona kuwedzera hupenyu hweshungu zvakanyanya.
B322 sanding disc zviri nyore kwazvo kushandisa uye kubatanidza kune sanders, sanding block, nezvimwe.
Yedu sanding discs seti inokupa iwe neiyo yakawanda-grit sandpaper iwe yaunoda. Iwe unowana makumi matanhatu emazana eorbital sander mapedhi ematanhatu akasiyana mamaki anosanganisira 40/60/80/120/180 / 320Grit. Iyo yakakwira iyo nhamba, iyo yakanakisa iyo grit
✅ YEMAHARA YEMAHARA KUSIMBISA
Yedu sanding mapedhi anogadzirwa kubva emhando yepamusoro aruminiyamu oxide hasha, inova yakasimba uye inopesana nekuvhara. Iyo aruminiyamu oxide zviyo inounza kukurumidza kucheka uye kumeso kupera pane yako projekiti
EM PREMIUM YAKADZOKA NEHURE 8
Kudzoka kwekurara kunoita kuti grit ibviswe uye kutsiva ikurumidze uye inorebesa hupenyu hwedhisiki rega rega, maburi masere akagadzirirwa kunyatsoburitsa guruva
✅ UNIVERSAL KUenderana
Yedu mashanu inch (125mm) sanding discs anokwana epasirose orbital sander, senge KABHUKU + DECKER, DEWALT, Bosch, Makita, PORTER-CABLE, nezvimwe.
✅ ZVESE ZVAKAWANDA
Yako nyowani brand sanding discs yakanakira kukuya uye kupedzisa pane simbi uye isiri-simbi, huni, rabha, dehwe, plastiki, dombo, girazi uye zvimwe zvinhu.
Pashure: Wholesale Green Firimu Hasha Turu Disc Sandpaper -L911
Zvadaro: Sanding Disc Hole Goridhe Sanding bepa rePolishing Mota uye Simbi -A720T
Wet uye Dry hasha makorari Sandpaper Sandin ...